अमेरिकामा फेरि एकै दिन १६ सयकाे मृत्यु, संक्रमित संख्या १४ लाख नाघ्याे – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
कोभिड- १९ अपडेटविश्वसमाचार
By डिजिटल खबर Last updated May 13, 2020 12 0
३१ वैशाख, काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या फेरि बढ्दै गएकाे छ । यसअघि आइतबार पहिलोपटक डेढ महिना (मार्च ३० देखि) यताकै कम दैनिक मृत्यु देखिएकाेमा साेमबार र मंगलबार त्याे पुनः उकालाे लागेकाे छ ।
मंगलबार त्यहाँ एक दिनमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ६३० रहेकाे छ । साेमबार त्यहाँ १ हजार ८ जनाकाे मृत्यु भएकाे थियाे । जबकि आइतबार ७५० मात्रकाे मृत्यु भएकाे थियाे । तर शनिबार भने एकै दिन मात्र १ हजार ४२२ को मृत्यु भएको थियो ।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या १४ लाख ८ हजार ६३६ पुगेको छ । त्यहाँ मंगलबार एकैदिनमा २२ हजार ८०२ नयाँ संक्रिमत थपिएका छन् । साेमबार भने त्यहाँ कोरोना संक्रमणका नयाँ केसहरुमा गत मार्च ३० यताकै कमी देखिएकाे थियाे । साेमबार १६ हजार १९६ नयाँ संक्रमित थपिएका थिए भने आइतबार याे संख्या २० हजार ३२९ रहेकाे थियाे ।
यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अमेरिकामा हालसम्म ८३ हजार ४२५ मानिसको ज्यान गइसकेको छ । २ लाख ९६ हजारभन्दा बढी बिरामी भने पूर्ण रुपमा निको समेत भइसकेका छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकी राज्य न्यूयोर्कमा पनि आइतबार कोरोनाबाट हुने दैनिक मृत्युका घटनामा निकै कमी आएको थियाे । आइतबार त्यहाँ कोरोनाका कारण ४१ जनाको मात्र ज्यान गएको थियाे भने १ हजार ९९७ नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् ।
तर मंगलबार फेरि न्युयाेर्कमा दैनिक मृत्यु संख्या ह्वात्तै बढेर १७२ पुगेकाे छ । यद्यपि त्यहाँ नयाँ संक्रमित भने मंगलबार घटेका छन् । मंगलबार १ हजार ५०४ नयाँ संक्रमित फेला परेकाे जनाइएकाे छ । साेमबार त्यहाँ नयाँ संक्रमित १ हजार ७४५ रहेका थिए भने १९१ काे मृत्यु भएकाे थियाे ।
कोरोनाका कारण अहिलेसम्म न्युयोर्कमा मात्रै २७ हजार १७५ को ज्यान गइसकेको छ । अर्को बढी प्रभावित राज्य न्युजर्सीमा पनि कोरोनाका कारण ९ हाजार २५४१ ले ज्यान गुमाएका छन् ।
के ‘प्रेस पास’ले कोरोना छेक्‍छ र !
सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र उनकी पत्नी निकितालाई कोरोना संक्रमण
चीनले भन्यो – अमेरिका भारतसँगको सीमा विवादबाट टाढा रहनु उतम्